नायिका वर्षा सिवाकोटीको मनोज गजुरेलसँग बिहे हुने हल्ला चलाइएपछि….! – साँचो खबर
नायिका वर्षा सिवाकोटीको मनोज गजुरेलसँग बिहे हुने हल्ला चलाइएपछि….!
‘कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो’ नायिका वर्षा सिवाकोटीले सोमवार फेसबूकमा लेखिन् । कसैले वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै भनेर लेखिदिएछ, त्यसले वर्षालाई अनावश्यक तनाव दियो ।
त्यसपछि उनले फेसबूकमा लेखिन्-
वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै” भनेर विभिन्न अनलाइनमा आएको समाचारहरू देख्दा दया लागेर आयो । भिजिटर बढाउने नाममा यथार्थभन्दा निकैबाहिर पुगेर गरिएको प्रचारले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम बनाएको छ । पत्रकारितामा गलत न्यारेटिभ सेट गर्ने हिसाबले फैलाइएका यस्ता हल्लाहरूले सही अर्थमा पत्रकारिता गर्नेमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
आदरणीय सर, मनोज गजुरेलको र मेरो बाटो अलग-अलग छ । मेरो उहाँप्रति सम्मान सधैँ उचो नै रहेको छ । हामीलाई जोडेर कुप्रचार गर्दा कसको पो फाइदा होला र ? कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो । वर्षा अमेरिकामा रहेका एक युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । उनी केही समयअघि अमेरिका पुगेर फर्किएकी छन् ।
“वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको बिहे हुँदै” भनेर विभिन्न अनलाइनमा आएको समाचारहरु देख्दा दया लागेर आयो । भिजिटर बढाउने…Posted by Barsha Siwakoti on Sunday, December 13, 2020
Previous: काठमाडौंमा कांग्रेसको प्रदर्शन : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
Next: सरकारले किसानलाई पैसा दिएर मिल मालिकसँग उठाए हुन्छ : उखु किसान